Ra’iisul Wasaare Rooble oo soo saaray digniin ku socota Puntland, Jubbaland iyo NISA.
July 22, 2021 Xuseen 4
Ra’iisul xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay siyaasiyiin iyo shakhsiyaad la sheegay in loo diiday in ay u dhoofaan gobolka Gedo, isaga oo ku amray hay’adda nabad-sugidda ee NISA iyo ciidamada boolisku in aysan qofna ka celin karin gobolada kale duwan ee Soomaaliya.
“Waxaan farayaa hay’adaha amniga booliiska iyo NISA, warar badan baa isoo gaaraya oo ah in dad laga celiyay meelo kala duwan. Uma dulqaadan dooni, qofkii uu falkaasi ku soo baxana tallaabo sharci ah ayaan ka qaadayaa,” Sidaasi waxaa yiri Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
“Muwaadinka lagama celin karo airport-ka. Diyaaradna lagama celin karo ka baxaysa Muqdisho oo tagayso Garbahaarey. Diyaarad Garbahaarey ka baxaysa oo Kismaaya tageysana lama celin karo, iyo mid Kismaayo ka tageysa oo Xamar ama Garbahaarey u socoto,Waa xaq Dastuuri ah cid is hortaagi kartana ma jirto.”ayuu yiri RW Rooble.
Ugu dambayntiina Rooble ayaa sheegay in muwaadin walba oo Soomaaliyeed xaq u lee yahay inuu tartamo aanna lagu colaadin karin fikirkiisa siyaasadeed,“Muwaadinka musharraxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo iyo fikirkiisa, uuna magaalada uu doona ka safro, una sufro halkii uu rabo.”
Arrintaani waxa ay saamayn xooggan ku leedahay maamulada Puntland iyo Jubbaland oo sigaar ah loogu xaglinayey inay ka soo horjeedaan musharaxnimada rag taageersan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo Hay’adda NISA oo DFS u adeegsato daneheeda gaarka ah.
Asc walaalayaal miyaan la’o4ankarin raysal wasaarahu wuu iskahadlay oo kaliya waayo waanu ognahay awooda dawyladiisa iyo intay maamusho marka qof lagaceliyay tobolada dalka waxba kamabadalikaro iskahadlow ina igare weeye warkaasi
Asc walaalayaal miyaan la’orankarin raysal wasaarahu wuu iskahadlay oo kaliya waayo waanu ognahay awooda dawyladiisa iyo intay maamusho marka qof lagaceliyay tobolada dalka waxba kamabadalikaro iskahadlow ina igare weeye warkaasi
Been badanaa oo puntland xumaan la jecelaa balaayo kugu dhacdsy xagee buu puntland kaga hadlay jubaland iyo Nissan ayuu ka hadlay oo weliba Nissa ayuu digniin iyo Farmaajo oo ku adeegta ayuu digniin adag siiyeyey
Ini Geylan daayeer laangaab ah adduunkana cuqdad u dhimo Aakhirona cadaab baa sugeysaa.